यशैया 37 ERV-NE - हिजकियाहले - Bible Gateway
हिजकियाहले परमेश्वरलाई सहयोग मागे
37 राजा हिजकियाहले ती कुराहरू ध्यानपूर्वक सुने। त्यसपछि उनले आफ्ना लुगाहरू च्याते अनि आफ्नो शोक प्रकट गरे। त्यसपछि उनले शोक वस्त्रहरू लगाए, अनि परमप्रभुको मन्दिर गए।
2 हिजकियाहले राज-दरबारका व्यवस्थापक एल्याकीम राजकीय सचिव शेब्ना अनि पूजाहारीहरूका बूढा-प्रधानहरूलाई आमोसको छोरा अगमवक्ता यशैयाकहाँ पठाए। तिनीहरूले यस्ता लुगाहरू लगाएका थिए जसले तिनीहरूको शोक र खिन्नता प्रकट गर्दथ्यो।3ती मानिसहरूले यशैयालाई भने, “राजा हिजकियाहले आदेश गरे कि आजको दिन दु:ख र शोकको विशेष दिन हो। यो अत्यन्तै शोकमय दिन हुनेछ। यो यस्तो दिनु हुनेछ जब एउटा बालक जन्मनेवाला छ। तर शक्तिको अभावमा जन्म लिन सक्तैन्।4सेनापतिको मालिक, अश्शूरका राजाले उसलाई जीवित परमेश्वरको बारेमा अनिष्ट कुराहरू भन्नलाई पठाए। हुन सक्छ परमप्रभु तपाईंका परमेश्वरले ती कुराहरू सुन्नु भएकोछ। शायद परमप्रभुले शत्रुको गल्ती छ भनेर प्रमाण गर्नु हुनेछ। यसकारण छाडिएका ती मानिसहरूका लागि प्रार्थना गर जो अझ जीवित छन्।”
5 राजा हिजकियाहका अधिकारीहरू यशैयाकहाँ गए।6यशैयाले तिनीहरूलाई भने, “यो सन्देश तिमीहरूका मालिक हिजकियाहलाई देऊ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ‘कप्तानहरूका कुराहरू सुनेर तिमीहरू नडराऊ! अश्शूर राजा बाट मेरो बारेमा आएका ती “केटाहरूले” जुन अनिष्ट चीजहरू भने त्यो विश्वास नगर।7हेर, म अश्शूरको विरूद्ध एउटा आत्मा पठाउने छु। अश्शूरका राजाले चेताउनी स्वरूप उसको देश कष्टमा पर्नेछ। यसकारण ऊ आफ्नो देशमा फर्केर जानेछ। त्यसबेला, म उसलाई उसको आफ्नो देशको तरवारले मार्नेछु।’”
अश्शूरका सेनाले यरूशलेम छोड्दछन्
8 अश्शूरका राजाले एक विवरण प्राप्त गरे। विवरणमा भनिएको थियो, “तिर्हाकाह, कूशका राजा, तिमीहरूसँग लडाईं गर्न आइरहेछ।” यसर्थ, अश्शूरका राजाले लाकीश त्यागेर लिब्नामा गए।9कप्तानले त्यस्तो सुने, अनि ऊ लिब्ना शहरमा गए जहाँ अश्शूरका राजा युद्ध गरिरहेका थिए।
उनले हिजकियाहकहाँ दूतहरू पठाए। 10 उनले भने, “तिमीले यहूदाका राजा हिजकियाहलाई यी कुराहरू भन्नै पर्छ:
‘तिमीहरूले विश्वास गर्ने ईश्वरद्वारा मूर्ख नबन। यसो नभन, “परमेश्वरले अश्शूरका राजाद्वारा यरूशलेमलाई परास्त गराउनु दिनु हुने छैन।” 11 अश्शूरका राजाहरूले अन्य सारा देशहरूलाई के गरे भनेर सुनेकाछौ। तिनीहरूले तिनीहरूलाई पूर्ण रूपले नष्ट पारी दिए। के तिमीहरू सुरक्षित हुनेछौ? अँहँ। 12 के ती मानिसहरूका देवताहरूले तिनीहरूलाई बचाउनु भयो? अँहँ। मेरा पुर्खाहरूले तिनीहरू सबैलाई ध्वंश पारिदिए। तिनीहरूले गोजान, हारान, रेसेपमा बस्ने मानिसहरू अनि तलस्सारमा बस्ने एदेन वंशीहरूलाई नष्ट पारे। 13 हमातका राजा कहाँ छन्? अर्पादका राजाकहाँ छन्? सपर्वेमका राजा कहाँ छन्? हेना र इब्बाका राजाहरू कहाँ छन्? तिनीहरू सबैलाई ध्वंश पारियो।’”
हिजकियाहले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरे
14 हिजकियाहले दूतहरूका हातबाट चिट्ठी लिए अनि पढे। त्यसपछि हिजकियाह परमप्रभुको मन्दिरमा गए। हिजकियाहले चिट्ठी खोले र परमप्रभुको समक्ष राखिदिए। 15 हिजकियाहले परमप्रभुसित प्रार्थना गर्दै भने, 16 “हे सेनाहरूका परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्वर, तपाईं राजा सरह करूब दूतहरूमाथि बस्नु हुन्छ। तपाईं, अनि तपाईं मात्र, परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले पृथ्वीमा भएका सारा राज्यहरूमाथि शासन गर्नु हुन्छ। तपाईंले स्वर्गहरू र पृथ्वी बनाउनु भयो। 17 हे परमप्रभु, दया गरेर मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन्नु होस्। परमप्रभु, आफ्ना आखाँहरू खोल्नु होस् यस सन्देशमा हेर्नुहोस। हे जीवित परमेश्वर! सनहेरीबबाट तपाईंलाई निन्दा गर्न पठाएका शब्दहरू सुन्नुहोस्। 18 हे परमप्रभु! यो सत्य हो, अश्शूरका राजाहरूले जम्मै जातिहरू नाश गरे। 19 अश्शूरका राजाहरूले ती जातिहरूका सबै देवताहरू जलाई दिए। तर तिनीहरू वास्तविक रूपमा देवताहरू थिएनन्। तिनीहरू खाली मानिसहरूले बनाएका काठ र ढुङ्गाहरूका मूर्तिहरू थिए। यसैकारण अश्शूरका राजाहरूले तिनीहरूलाई नाश गर्न सके। 20 तर तपाईं परमप्रभु हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसैले कृपा गरेर हामीलाई अश्शूरका राजाबाट बचाउनु होस्। तब सारा जातिहरूले जान्ने छन् कि तपाईं हाम्रो परमप्रभु हुनुहुन्छ, अनि तपाईं मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ।”
परमेश्वरको हिजकियाहलाई जवाफ
22 “सनहेरीबको बारेमा यो परमप्रभुको सन्देश हो:
‘सियोनकी कन्या-छोरी सोच्छे तिमी महत्वपूर्ण छैनौ।
उसले तिमीलाई खिसी गर्छे।
यरूशलेमकी छोरीले तिमीहरूलाई हाँसोको पात्र बनाउँछे।
र तिम्रो पछि तिम्रै खिल्ली उडाउँछे।
23 तिमीले कसलाई अपमान गर्यौ र हाँसोको पात्र बनायौ?
तिमीहरूले कसको विरोधमा आवाज उठायौ?
तिमीहरू इस्राएलका परम-पवित्रको विरूद्ध थियौ।
तिमीहरूले आफूलाई उहाँ भन्दा महान सोच्यौ।
24 तिमीहरूले आफ्ना अधिकारीहरू परमप्रभु,
मेरा मालिकलाई अपमान गर्न पठायौ।
तिमीले भन्यौ, “म अत्यन्त शक्तिशाली छु।
मसँग धेरै-धेरै रथहरू छन्।
म आफ्नो शक्तिले लबानोनलाई परास्त गर्छु।
म लबानोनको उच्चतम पर्वतहरूमा चढें।
मैले लबानोनका सबै ठूलो रूखहरू काटेर ढालें।
म ती उच्च पर्वत र जङ्गलको गहिरो भागहरूभित्र थिएँ।
25 मैले इनारहरू खनें र नयाँ ठाउँहरूबाट पानी पिएँ।
मैले मिश्रका नदीहरू सुक्खा पारी दिएँ
अनि त्यस देशमाथि कुल्चेर हिडें।”
26 ‘त्यही त तिमीले भनेको हो तर तिमीले मैले के भनें सुनेनौ।
मैले धेरै अघि योजना बनाएको थिएँ।
मैले यो प्राचीनकालदेखि नै योजना बनाएको थिएँ
अनि अहिले मैले यसलाई गराएँ।
मैले तिमीलाई शक्तिशाली शहरहरू ढाल्ने
अनि तिनीहरूलाई भग्नावशेष परिणत गर्ने अनुमति दिएँ।
27 त्यस शहरहरूमा शक्ति थिएन
तिनीहरू भयभीत र अन्योलमा थिए।
तिनीहरू खेतमा भएका घाँस
र पालुवाहरू जस्ता काटिन लागेका थिए।
तिनीहरू हुर्किनु भन्दा अघिनै ओइलाई जाने
घरका छानाहरूमा उम्रिएका घाँसहरू सरह भए।
28 म तिम्रा सारा युद्धहरूका विषयमा जान्दछु।
तिमीले कहिले आराम गर्यौ त्यो म जान्दछु,
तिमी कहिले युद्ध तर्फ गयौ त्यो म जान्दछु
तिमी कहिले युद्धबाट घरमा फर्कियौ म जान्दछु।
म यो पनि जान्दछु कि तिमी मसित कहिले खिन्न भयौ।
29 हो, तिमी मसित खिन्न थियौ।
मैले तिम्रो अंहकारी अपमानहरू सुनें
यसैले मैले तिम्रो नाकमा अंकुसे राखी दिएँ।
अनि मैले तिम्रो मुखमा लगाम लगाई दिएँ।
त्यस पछि मैले तिमीलाई फनक्क घुमाएँ
र जहाँबाट आएका थियौ त्यतै डोर्याएँ।’”
हिजकियाहलाई परमप्रभुको सन्देश
30 त्यसपछि परमप्रभुले हिजकियाहलाई भन्नुभयो, “म तिमीलाई यी शब्दहरू सत्य हुन भनी देखाउने एउटा यस्तो संकेत दिने छु। तिमी बिऊ छर्न अयोग्य थियौ। यसैले यो बर्ष तिमी बिऊ नछरी उम्रिएको नै खानेछौ। तर तीन बर्षमा तिमी आफैंले रोपेको अन्न खानेछौ। तिमीहरू ती अन्नहरू उमार्नेछौ अनि तिमीसित खानलाई प्रचूर अन्न हुनेछ। तिमी अङ्गुरका विरूवा रोप्नेछौ अनि त्यसको फल खानेछौ।
31 “यहूदाका कुलबाट आएका सन्तानहरू जो भागेको थिए र जीउँदै छाडिएका थिए ती बढ़न थाल्नेछन्। ती मानिसहरू पालुवाहरू जस्ता हुन जसले आफ्ना जराहरू गहिरो प्रकारले भूईंमा गाडिएका छन् र भूईँमाथि फल फलाउँदछन्। 32 केही मानिसहरू मात्र जिउँदो रहनेछन् अनि यरूशलेम बाहिर जानेछन्। केही बाँचेकाहरू सियोन पर्वतबाट आउनेछन्।” यस्तो सेनाहरूका परमप्रभुको जोश प्रेम कै कारण हुनेछ।
33 यसकारण परमप्रभुले अश्शूरका राजाको बारेमा भन्नुहुन्छ:
“उनी यस शहर भित्र आउने छैनन्,
उनले यस शहरमा काँड हान्ने छैनन्।
उनले आफ्नो ढालहरू यो शहरको लागि ल्याउने छैनन्
उनले यो शहरका पर्खालहरूमा धावा बोल्नलाई कुनै प्रकारको गढ बनाउने छैनन्।
34 उनी जुन बाटो आएका थिए,
त्यही बाटो फर्केर जान्छन्।
उनी यस शहरभित्र आउने छैनन, भनेर परमप्रभु भन्नुहुन्छ।
35 म यस शहरको सुरक्षा गर्नेछु र बचाउनेछु,
यो म मेरै निम्ति र मेरो दास दाऊदको लागि गर्नेछु।”
36 त्यस रात, परमप्रभुका दूत गएर अश्शूरहरूको छाउनी एक लाख पचासी हजार मानिसहरूलाई मारे। जब बाँचेका मानिसहरू बिहान ब्यूँझे तिनीहरूले आफ्ना वरिपरी मृत शरीरहरू देखे। 37 यसैले अश्शूरका राजा, सनहेरीब, निनवेमा गए अनि त्यहाँ बसे।